मृत्युपछिको जीवनमा हामी आफ्ना पूर्खाहरुलार्इ सहायता कसरी गर्न सक्छौं ?
परिवारको कुनै सदस्यको निधन पछि, हाम्रो संस्कृति अनि परम्परा अनुसार, हामी अनेक प्रकारले श्रद्धान्जलि दिन्छौं
उनको समाधिमा फूल चढाएर
समाचारपत्रको निधन सूचना पृष्ठमा उनको स्मृतिमा आभार छपाएर
उनको छायाचित्र घरमा टागेर
सामान्य रूपमा गरिने माथि दिएका सबै विधिहरु हाम्रो दिवंगत पूर्खालार्इ मृत्युपछि को जीवनमा सहायता गर्नको लागि कुनै महत्त्व राख्दैन, वास्तव ती उनको लागि हानिकारक हुन सक्छ । तल दिएको तालिकामा हामीले वंशजद्वारा आफ्नो पूर्खाको लागि गरिने केहि सामान्य विधियहरुका तुलनात्मक महत्त्व देखाएका छौं । यो तालिकामा दिएको तथ्याङ्क ४० प्रतिशत आध्यात्मिक स्तर भन्दा कम स्तर व्यक्तिको सन्दर्भमा हो । जसरी-जसरी व्यक्तिको आध्यात्मिक स्तर ४० प्रतिशत भन्दा माथि बढ्दै जान्छ, तल दिएको विधिहरुमा तुलनात्मक महत्त्वमा परिवर्तन हुन सक्छ । यो ज्ञान आध्यात्मिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको हो ।
दिवंगत व्यक्तिको निधन-सूचना लेख्ने ०%
व्यावसायिक शोक मनाउने व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने नकारात्मक प्रभाव२
अन्तिम संस्कारको समय प्रशंसा भाषण ०%
दिवंगत व्यक्तिको चित्र राख्ने / अथवा माला लगाएर घरमा राख्ने नकारात्मक प्रभाव
च्यान धाटमा जाने तथा फूल चढाउने नकारात्मक प्रभाव
अन्तिम संस्कार पछि केहि समयको लागि कालो कपडा लगाउने ०%
दिवंगत व्यक्तिको नाममा स्मारक बनाउने नकारात्मक प्रभाव
दिवंगत व्यक्तिको लागि उनको परिवार तथा प्रियजनहरुले प्रार्थना गर्ने १०%
श्री गुरुदेव दत्त’ को सुरक्षात्मक नामजप गर्ने१ १००%
१. श्री गुरुदेव दत्त नामस्मरणको कुल लाभ विभिन्न कारणमा निर्भर गर्दछ जस्तै – पूर्खाको कष्टको तीव्रतालार्इ प्रतिकार गर्नको लागि गरिने नामजपको संख्या, ध्यानपूर्वक नामजप गर्ने, नामजप गर्ने व्यक्तिको श्रद्धा तथा भाव इत्यादि ।
२. ‘नकारात्मक प्रभाव’ को अर्थ हो, त्यस्तो विधिहरु गर्नाले केहि समय पहिला बित्नु भएको व्यक्तिको सूक्ष्म-देह, पृथ्वीमा पूर्व जन्मसँग भावनात्मक रूपले जोडि राख्न सक्छ । अनिष्ट शक्ति उनको यो आसक्ति अथवा नजिक पनको उपयोग मृत पूर्खालार्इ आफ्नो नियन्त्रणमा गर्ने तथा मृत्यु पछि उनीलार्इ आगाडिको गतिमा बाधा गर्नको लागि उपयोग गर्न सक्छ । यस्तो मुख्यतः निम्न आध्यात्मिक स्तर भएको मृत पूर्खाको सन्दर्भमा हुन्छ ।
आध्यात्मिक अनुसन्धानद्वारा थाहा भयो कि मृत्यु पश्चात लभगभ ६०% पूर्खाहरुलार्इ पर्याप्त आध्यात्मिक स्तरको अभावले एवं तीव्र र्इच्छाहरुको कारण गति मिल्नमा कठिनाई हुन्छ अनि भूलोकलार्इ पार गर्न पनि कठिन हुन जान्छ । त्यसैले ती मध्य अधिकतर पारिवारिक घरमा नै निवास गर्दछ ।
मृत्यु पछि जीवनमा हामी आफ्नो पूर्खालार्इ सहायताको लागि धेरै गर्न सक्छौं । आगामी लेखमा हामी यो सम्बन्धित विभिन्न सूत्रहरु बुझ्नेछौं ।
१. आध्यात्मिक दृष्टिले सुरक्षा-कवच – ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को जप
आफ्नो पूर्खालार्इ तत्काल सहायताको लागि, हाम्रो अनुरोध छ कि श्री गुरुदेव दत्तको जप आरम्भ गर्नुहोस् । यो आध्यात्मिक दृष्टिले सुरक्षा प्रदान गर्दछ । आध्यात्मिक दृष्टिले सुरक्षा प्रदान गर्ने ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को जपको अर्थ के हो ?, यो लेखको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
२. हाम्रो मृत पूर्खाहरुलार्इ सहयोग चाहिन्छ किन कि मृत्युको समय मृत्य शरीर अनि सुस्मदेह असुरक्षीत हुन्छ
मृत्युको समय उत्सर्जित वायु (excretory gases) वायु नित्यरूपमा शरीरबाट बाहिर फ्याक्ने निरुपयोगी स्थूल वायु हुन्छ । यसको स्पन्दन तथा तरङ्ग नकारात्मक अर्थात् अनिष्ट हुनुको कारण सम्लग्न वायुमण्डलमा तमोगुण बढेर जान्छ । अनिष्ट शक्ति यी कष्टप्रद स्पन्दन तर्फ आकर्षित भएर मृतदेहसँग सम्लग्न वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दछ ।
यो अनिष्ट शक्ति पञ्चप्राणको तथा पञ्चउपप्राणको शक्तिहरुमा, जुन मृत्युको समय ब्रह्माण्डमा मुक्त (विलीन) हुने प्रक्रियामा हुन्छ, नियन्त्रण प्राप्त गरि मृतदेहमा आक्रमण गर्दछ । अनिष्ट शक्ति मृतदेहलार्इ धुवाँ समान कालो शक्ति प्रक्षेपित गर्दछ अनि मृतदेहलार्इ सबै तर्फबाट घेरेर कालो आवरण निर्माण गर्दछ । अनिष्ट शक्तिको आक्रमणको कारण कालो तरङ्ग मृतदेहमा सम्क्रमित हुँदा भूत (राक्षस, दुष्ट, नकरात्मक शक्ति) जस्तो कालो तरङ्गबाट प्रभारित (charged) हुन जान्छ ।
पञ्चप्राण एवं उपपञ्चप्राणको शक्तिमा नियन्त्रण पाएपछि अनिष्ट शक्ति सूक्ष्मदेहलार्इ जालमा फसाउनको लागि कालो शक्तिको भुमरी संक्रमित गर्दछ । यस प्रकार अनिष्ट शक्ति मृत पूर्वजको सूक्ष्मदेहलार्इ आफ्नो आक्रमण क्षेत्रमा खिच्दछ । त्यसपछि त्यो सूक्ष्म-देहलार्इ उनको कालो तरङ्ग जालमा फसाएर मृत्युपछि जीवनमा उनीलार्इ आगाडिको यात्रामा बाधा निर्माण गर्दछ । केहि समयपछि अनेक अनिष्ट शक्ति सूक्ष्मदेहमा कालो शक्तिको भुमरी निर्मित गरेर उनीद्वारा आक्रमण गरि उनलार्इ आफ्नो सम्पूर्ण नियन्त्रणमा लिन्छ । अनिष्ट शक्ति मृतदेहमा अनि मृत पूर्खाको सूक्ष्म-देहमा योजनाबद्ध पद्धतिले नियन्त्रण प्राप्त गर्दछ ।
स्पिरिच्युअल साईन्सको अनुसार मृत्युको समय अनिष्ट शक्तिद्वारा गरिने आक्रमणबाट सूक्ष्म-देहलार्इ सुरक्षाको लागि विशिष्ट धार्मिक संस्कार आवश्यक हुन्छ । अधिकतर प्रसङ्गमा व्यक्तिको यो संस्कार अथवा यसलार्इ प्रत्यक्ष कसरी गर्ने हो, यसको सन्दर्भमा जानकारी हुँदैन ।
३. ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को जप गर्दा फार्इदा
आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को जप गर्दा हुने प्रमुख फार्इदा निम्न प्रकारले हुन्छन् ।
रज-तम कम गर्ने : दत्त देवता हाम्रो पूर्खालार्इ गति प्रदान गर्ने ईश्वरीय तत्त्व हो । ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को नामजपबाट लक्षणीय तेजःपुंज तरङ्ग प्रक्षेपित हुन्छ । यो तरङ्ग मृत पूर्खाको सूक्ष्मदेहको सबैतर्फ विद्यमान इच्छा तरङ्गको तीव्रता कम गरिदिन्छ । यसले सूक्ष्मदेहको रज-तम कम हुन्छ अनि परिणामस्वरूप उनको भार कम हुन्छ । यसले सूक्ष्म-देहललार्इ उनको अगाडिको यात्राको लागि शक्ति प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ ।
सुरक्षा-कवच : मृत शरीर तथा सूक्ष्म-देह को सबैतर्फ सुरक्षा-कवच निर्मित हुन्छ ।
गति प्राप्त हुने : इच्छारूपी आसक्ति पनि कम हुनाले सूक्ष्म-देहलार्इ कम समयमा भूलोक पार गर्न सम्भव हुन्छ ।
आध्यात्मिक स्तरमा वायुमण्डलको शुद्धि : नामजप गर्नाले वायुमण्डलमा चैतन्यको कण निर्मित हुन्छ । यसले सूक्ष्म-देहलार्इ फार्इदा हुन्छ । वायुमण्डलमा विद्यमान कष्टप्रद तरङ्गबाट नामजप गर्ने व्यक्तिलार्इ पनि सुरक्षा मिल्दछ ।
निरन्तर सुरक्षा : प्रतिदिन ‘श्री गुरुदेव दत्त’ को नामजप गर्नाले हामीलार्इ पूर्खाद्वारा निर्मित कष्टबाट सुरक्षा मिल्दछ । यसले हामी आफ्नो पूर्खालार्इ मृत्युपछिको जीवनमा आवश्यक सत्त्वगुण दिएर उनको आगाडिको यात्रामा सहायता गर्दछौं ।
४. तपार्इको कुन पूर्खालार्इ यो नामजपले फार्इदा हुन्छ ?
जुन पूर्खा हामीलार्इ अत्यधिक कष्ट दिन्छ, उनलार्इ अत्यधिक फार्इदा हुन्छ तथा त्यही पूर्खालार्इ प्रधानताले ‘गुरुदेव दत्त’ को नामजपले आध्यात्मिक सुरक्षा मिल्न सहायता हुन्छ ।